Abaningi bangavuma ukuthi kokuba ekhaya lakho siqu - kungcono Kujabulisa ngempela. Yini enye engcono kunalokhu ngemva kosuku olunzima ngelule otshanini, futhi, novala amehlo akhe kusukela imisebe yelanga nokuphathaphathana, awela ukozela ukukhanya! Kodwa ukuze injabulo abalale utshani phambi kubalulekile ukuletha utshani zisesimweni ephelele. Ngisho endaweni encane, oluneziqhingi utshani Emerald, kudinga ukunakekelwa. Ngenkathi efudumele izikhathi eziningana ngenyanga kufanele sika utshani.
Umkhiqizi engadini imishini
Omunye Abenzi imishini izinga izingadi, utshani nokutshala iyinkampani Huter German. Trimmers, utshani mowers, tillers, chainsaws, ingcindezi washers , futhi sebuningini nezinye izinto zokusebenza ishicilelwe ngaphansi kwalesi uphawu. Quality, ukuthembeka ukuqina imikhiqizo yayo itjhejwa ucwaningo eziningi. Inani elikhulu labantu recognize ukuthi le nhlangano inikeza nohlu omuhle kakhulu engadini imishini ngamanani Akumangalisi okungabizi.
Letha utshani ukuze? Easy!
Ngo sisikhulu phakathi kwabantu isebenzisa umshini futhi uvumela Huter inkampani - kusilungisi Ukunakekela eduze endaweni cottage. Lokhu imishini kungenziwa eliqhutshwa noma ugesi noma nophethiloli. Ngaphezu kwalokho, futhi ngaphezu kwalokho, futhi olunye uhlobo kunezinzuzo zako siqu kanye nobubi obuthile. Cabanga likaphethiloli okufana Huter art. Kusilungisi abasebenza fuel, it has a injini ezimbili-unhlangothi. Kuye imodeli, ivolumu motor kungaba isukela 25 kuya kwezingu-43 cubic ngamasentimitha. Injini ifakwe ohlelweni emoyeni Ukupholisa ngomoya, futhi ukuthungela electronic. Uhlonze lwalo, futhi, kuncike nguqulo imodeli futhi ingafinyelela 1300 Watts. A isici esihle esimweni esingajabulisi ukutholakala kohlelo, okuvumela isikhathi ukhululekile futhi isikhathi eside ukusebenzisa imishini ngaphandle kokuzizwa kunyakaza futhi jolts. Inkampani Huter, a kusilungisi kuyinto bayindlala kakhulu phakathi abathengi, uye kunakwe izifiso zakhe futhi ukunciphisa isisindo imishini ngenkathi sigcina nezinye izici. Ngakho, uphethiloli art isisindo 7 kg. Nokho, kuyinto kancane more uma iqhathaniswa ngokuthi "mfowethu" yayo kagesi. Tank besikhundla cishe wonke amamodeli kuyinto 0.7 amalitha.
Uphethiloli kusilungisi Huter GGT 1000t
motokosilok inkampani Umugqa ubanzi kakhulu. Omunye ezahlukeneyo yaleli su iwukuba ukunciphisa uphethiloli Huter GGT 1000t. Lokhu imishini ilungele ukusetshenziswa surface kokubili flat futhi inamagquma, ukuze kanzima ukuze afinyelele izindawo, kwaphela ugunda utshani high and low. kukhona cap-disk "ummese" ukusika notshani amagatsha. Lokufuduka imodeli imoto icishe 33 cubic ngamasentimitha. Ngaphezu kwalokho, umthamo wayo ifinyelela 1.36 amahhashi. iminithi Omunye injini wenza isilinganiso sama-8,000 ngomzuzu. Inani iyunithi - ngaphakathi kwemikhawulo ruble 5000. Kuye nomthengisi, ukukha isizini futhi izindleko izimpahla zingahluka.
Ukuqhathanisa analog kagesi
Uphethiloli kusilungisi Huter, ukubuyekezwa zazo zingenalo umzuzwana nje elilodwa, namanje unobuthakathaka kuqhathaniswa analog kagesi. Eyokuqala - Yiwo umsindo. Sound wotshani injini nophethiloli ingaphezu kwe kagesi. Enye lokususa - yiyona isisindo. Njengoba ngishilo ngenhla, uphethiloli kusilungisi okwesikhathi amakhilogremu ambalwa ngoyisiwula kusinda kunakho kagesi. Nokho, ithuluzi fuel Ubuye inzuzo enkulu: asikho isidingo ukubheka umthombo wamandla kude impucuko.
Zokushisela inverter - amandla amandla Welding
Nokia Lumia 510: Ukucaciswa, ukubuyekezwa. Indlela ukuxhuma ifoni yakho ku-PC yakho njengoba sicela kanjani ukushintsha usuku?
Njengoba amaprotheni isiswebhu ngendlela Foam okuqinile: ulungiselela meringue-ikhekhe noma ezinye namakhekhe
Benign izimila wesibeletho: izifo, izimpawu, ukwelashwa
Zingaki izifunda federal isiRashiya, futhi lokho abayikho for?